Daafaca Liverpool Andy Robertson oo ka hadlay wararka sheegaya in qolka labiska ay isku dagaaleen Alisson Becker
Home Horyaalka Ingiriiska Daafaca Liverpool Andy Robertson oo ka hadlay wararka sheegaya in qolka labiska...
Daafaca Liverpool Andy Robertson ayaa ku qoslay arinta ku saabsan inuu ku lug lahaa dagaal Alisson Becker horaantii bishaan qolka labiska. Iyadoo Reds ay ku jirto qaab ciyaareed xun Premier League sannadka 2021.
warar soo baxay ayaa sheegaya in laba xubnood oo lagu kalsoon yahay oo ka mid ah safka dambe ee Jurgen Klopp ay ku lug yeesheen isku dhac, iyadoo daafaca reer Scotland lagu eedeeyay inuu feeray goolhayaha Liverpool.
Si kastaba ha noqotee, Robertson ayaa ku gacan seyray sheegashooyinkaas wuxuuna ku celiyay weriyeyaasha sameeyay sheeko aad uga fog runta. Isaga oo la hadlaya Sky Sport (waxa laga soo xiganayaa Liverpool Echo ),
daafaca bidix ayaa sidoo kale qirtay in ay muhiim tahay in isaga iyo inta kale ee ay isku kooxda yihiin ee Liverpool joojiyaan dhamaan kubad xumada heysata kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Previous articleThomas Thuchel oo ka hadlay go’aankii uu ku bedelay Callum- hudson-odio.
Next articleDean Henderson oo dalbanaya in uu ka tago kooxda Manchester United